You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Others / Ketogenic diet အ ကြောင်း ပြော ပြ ပါ ဆိုု လိုု့ -----
Ketogenic diet မှာ အဆီ က အဓိက ဖြစ် နေ တာ မိုု့၊ အဆီ တွေ အ ကြောင်း ကိုု အရင် ဦး ဆုုံး သ ဘော ပေါက် နား လည် စေ ချင် ပါ တယ်။
ကျွန်မ တိုု့ တ တွေ အား လုုံး ကိုု အဆီ စား ရင် နှလုုံး ရောဂါ ဖြစ် စေ တတ် တယ်၊ အဆီ ပိတ် ပြီး သေ လိမ့် မယ် ဆိုု ပြီး ချောက် ထား တာ မိုု့ အဆီ ဆိုု တဲ့ အသံ ကိုု ကြား ရင်၊ အား လုုံး က အ လိုု လိုု လန့် နေ ကြ ပါ တယ်။
အဆီ တွေ လျော့ စား ရင်း နဲ့ ပဲ နှလုုံး သွေး ကြော ပိတ်၊ လေ ဖြတ်၊ သွေး တိုုး ၊ ဆီး ချို၊ ကိုုယ် အ လေး ချိန် တွေ တက်၊Thyroid ဓာတ် တွေ လျော့ ပါး လာ၊ cholesterol တွေ တက် ကြ လိုု့ cholesterol ချ ဆေး တွေ သောက် ကြ ရ၊ ဘေး တွက် ဆိုုး ကျိုး တွေ ကိုု မ ခံ နိုုင် ကြ လိုု၊့ လိမ့် နေ တဲ့ လူ တွေ က လဲ အ များ ကြီး၊ အ ကုုန် လုုံး ဗြောင်း ဆန် နေ တာ ကိုု တွေ့ နေ ရ ပါ တယ်။
ဒါ က so called experts တွေ ရဲ့ စကား ကိုု နား ထောင် ပြီး ဖြစ် နေ ကြ တာ ပါ။
ဒါ ကြောင့် လဲ ကျွန်မ ပြော တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ စာ ဖတ် ကြ ပါ။ ဗဟုုသုုတ တွေ များ အောင် လုုပ် ပြီး ကိုုယ် ပိုုင် ဉာဏ် နဲ့ သုုံး သပ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
လောဘ ဦး ဆောင် နေ တာ မိုု့ သတိ ထား ရ မဲ့ ခေတ် ကြီး လဲ ဖြစ် နေ လိုု့ ပါ။
ဒီ နေ့ မ နက် ဆောင်း ပါး လေး တစ်ခုု ကိုု အမှတ် မ ထင် တွေ့ လိုုက် မိ ပါ တယ်။
ဆောင်း ပါး အ တိုုင်း ပြန် ပြီး ဝေငှ မယ် ဆိုု ရင် အ ချို့ လူ တွေ နား လည် ဖိုု့ ရာ ခက် ခဲ မှာ ဖြစ် တာ မိုု့ ကျွန် မ ကြိုးစား ပြီး ဘာ သာ ပြန် ပေး လိုုက် ပါ တယ်။
ခေါင်းစဉ် က Saturated Fats ( ဥပမာ ထောပတ်။ အုုန်းဆီ၊ ကြက်ဥ အနှစ်၊ ထော ပတ် သီး၊ အသား တွေ နဲ့ ပါ လာ တဲ့ အဆီ၊ Bacon စ သည် ဖြင့် ) တွေ ကိုု မ ကြောက် သင့် ကြောင်း အ ကြောင်း ပြ ချက် များ ------
၁. Saturated fats ( ဖော် ပြ ပါ အဆီ များ) သည် LDL cholesterol ရဲ့ပမာဏ ကိုု ကြီး မား စေ ပါ သည်။
လူ တိုုင်း ထင် နေ ကြ တာ LDL cholesterol ဆိုု ရင် မ ကောင်း ဘူး ၊ ဥပါဒ် ပေး တယ် ဆိုု တဲ့ အ ချက် ဖြစ် ပါ တယ်။
မြန်မာ လိုု အ ကျိုး မဲ့ cholesterol လိုု့ တောင် ခေါ် နေ ကြ တာ ကိုု တွေ့ ရ ပါ တယ်။
LDL cholesterol ဟာ နှစ် မျိုး ရှိ ပါ တယ်
၁. VLDL ပမာဏ သေး ပြီး အ လွန် သိပ် သည်း တဲ့ အ မျိုး အ စား။ ဒီ ဟာ မျိုး က ဥပါဒ် ပေး တတ် တဲ့ အ မျိုး အ စား ဖြစ် ပါ တယ်။
၂. Large fluffy type နောက် တစ် မျိုး က ပမာဏ ကြီး ပြီး ဝါဂွမ်း လိုု ပေါ့ ပေါ့ ပါး ပါး အ မျိုး အ စား။ ဒီ လိုု မျိုး က နှ လုုံး ရော ဂါ မ ဖြစ် စေ တဲ့ အ ပြင် အ ကျိုး ပြု တဲ့ အ မျိုး အ စား ဖြစ် ပါ တယ်။
အ ထုူး သဖြင့် ကလာပ် စည်း နံရံ တွေ ဟာ ဒီ လိုု မျိုး cholesterol နဲ့ တည် ဆောက် ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ခန္ဓာ ကိုုယ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ဟော် မုုန်း ဓာတ် တွေ ထုုတ် ဖိုု့ လဲ ဒီ cholesterol ကိုု ဘဲ အ သုုံး ချ ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Saturated fats တွေ ဟာ ဒီ အ ကျိုး ပြု large fluffy type cholesterol ကိုု များ လာ စေ ပါ တယ်။
ဒါ ကိုု ကြည့် ခြင်း အား ဖြင့် cholesterol level ကိုု သေသေချာချာ မစူး စမ်း မ ဆင် ချင် ဘဲ မ ချ သင့် ပါ ဘူး လိုု့ ပြော ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
LDL cholesterolများ နေ တာ နဲ့ ဘဲ cholesterol ချ ဆေး တွေ ကိုု တန်း ပြီး သုုံး မယ် ဆိုု ရင် မ သင့် တဲ့ အ ကြောင်း ကိုု ပြော ပြ တာ ပါ။
LDL များ နေ တယ် ဆိုု ရင် VLDL ကြောင့် လား၊ ဒါ မှ မ ဟုုတ် အ ကျိုး ပြု LDL များ နေ တာ လား ဆိုု တာ ဆန်း စစ် မ ကြည့် ရင် မ ဖြစ် ပါ။
၂. Saturated fats တွေ ဟာ အ ကျိုး ပြု cholesterol HDL level ကိုု လဲ မြှင့် တင် ပေး ပါ တယ် တဲ့။
၃. Saturated fats စား ခြင်း ဖြင့် နှလုုံး ရောဂါ မ ဖြစ် ပါ။
နောက်ဆုုံးသုုတေသန အရ ဆိုု ရင် သကြား ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။
အဆီ စား ရင် နှလုုံး သွေး ကြော ပိတ် တယ် ဆိုု တာ လဲ myth အမှား ကိုု အ မှန် လိုု့ ထင် နေ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အခုု နောက် ပိုုင်း သုုတေသန တွေ အ များ ကြီး ထွက် လာ ပါ ပြီ။ အဆီ ကြောင့် သွေး ကြော တွေ ပိတ် တယ် ဆိုု တာ ဆရာဝန် တွေ က အစ၊ သတင်း media အ ဆုုံး နေ့ စဉ် အော် နေ ကြ တော့ လည်း ပြည် သူ လူ ထုု က လဲ ဒီ လိုု ဘဲ ထင် နေ ကြ တာ အ ဆန်း မ ဟုုတ် တော့ ပါ။
၄. Saturated fats တွေ ကိုု ဟင်း ချက် ဖိုု့ အ ပူ ပေး တဲ့ အ ခါ ဓာတုုဗေဒ သတ္တိ တွေ မ ပြောင်း လဲ ကုုန် ပါ။ Oxidised လဲ မ ဖြစ် လွယ် ပါ။
အ လွန် ကျန်းမာ လှ ပါ တယ် ဆိုု ပြီး သုုံး နေ ကြ တဲ့ corn oil,soy bean oil, vegetable oil စ သည် တိုု့ ဟာ အပူ ပြင်း ပြင်း ပေး တဲ့ အ ခါ oxidized ဖြစ် ကုုန် ပြီး ခန္ဓာ ကိုုယ် တွင်း ယောင် ကိုုင်း စေ တဲ့ ဓာတ် များ ဖြစ် ကုုန် တတ် ပါ တယ်။
၅. Saturated fats ပါ တဲ့ အစား အ သောက် တွေ ဟာ၊ အာဟာ ရ အ ပြည့် ရှိ ပါ တယ်။
Fat soluble vitamins တွေ လဲ ပါ သ ပေါ့။
ဥပမာ grass fed cows မှာ ရ သော အသား များ၊ ထော ပတ်၊ တော သဘာဝ ကြက်ဥ များ၊ က လီ စာ များ
၆. ကိုုယ် အ လေး ချိန် ချ ချင် ရာ မှာ အစား အ သောက် ထဲ မှာ အ ဆီ များ များ ထည့် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အဆီ စား ရင် ခန္ဓာ ကိုုယ် က ကျေ နပ် သွား တဲ့ အ တွက် ခဏခဏ လဲ မ ဆာ တော့ တဲ့ အ တွက်၊ တ ချိန် လုုံး ဆာ နေ တဲ့ အ ကျင့် လဲ ပျောက် သွား နိင် ပါ တယ်။
အဆီ က ရ တဲ့ စွမ်း အင် တွေ ဟာ သ ကြား ဓာတ် ထက် လဲ ၃ ဆ ပိုု များ ပါ တယ်။
ရ. Saturated fats တွေ ဟာ အ လွန် လည်း အရသာ နဲ့ ပြည့် စုုံ ပါ တယ်။
ဥပမာ bacon, eggs butter Yummy!!!!
ဂ. အ ချို့ သုု တေသန များ အဆိုု အရ လေ ဖြတ် တဲ့ နှုံး တောင် လျော့ ပါး စေ ပါ တယ် တဲ့။
ဗဟုုသုုတ အ တွက် ကျွန်မ က ဘာ သာ ပြန် ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ ကိုုယ် တိုုင် လည်း ဒီ အ တိုုင်း ဘဲ ကျင့် သုုံး ပါ တယ်။
Low fat diet, non fat diet တိုု့ ကိုု ပြန် လည် သုုံး သပ် ရ မဲ့ အ ချိန် ရောက် နေ ပါ ပြီ။
လူ တွေ အ များ စုု ဟာ အဆီ ကိုု လျော့ ပြီး သ ကြား စား သုုံး လာ တာ များ လာတာ နဲ့အ မျှ ရောဂါ မျိုး စုုံ နဲ့ ခံ နေ ကြ တယ် ဆိုု တယ် လဲ မျက် မြင် သက် သေ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ Ketogenic diet ဟာ ကင်ဆာ ရောဂါ ရှင် တွေ အတွက် အကောင်းဆုုံး ဖြစ် ပါ တယ် ။
Saturated fats used to be considered unhealthy but new research shows this to be untrue. Here are 8 reasons not to fear saturated fats.